New Shipping Rules, China Pummel Asian Refinery Profits: Russell | Myanmar Business Today
HomeBusinessInternationalNew Shipping Rules, China Pummel Asian Refinery Profits: Russell
While this was up slightly from the seven-month low of $13.63 on Nov. 21, it’s still some 27 percent below the peak so far in 2019 of $19.14 from Sept. 9.
အာရှ စက်သုံးဆီ သန့်စင်ထုတ်လုပ်သည့် လုပ်ငန်းများမှာ အကြောင်းပေါင်းစုံကြောင့် အမြတ်အစွန်းများ ထိခိုက်နေသည်။ ထိုအကြောင်းရင်းများအနက် အဓိကမှာ အသစ်ချမှတ်မည့် လောင်စာဆီတင်ပို့ရေးစံနှုန်းအသစ်များနှင့် ပတ်သက်၍ မရေရာမှုများ၊ တရုတ်နိုင်ငံက ရေနံအဓိက တင်ပို့သည့်နိုင်ငံ ဖြစ်လာခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။
အာရှရှိ လောင်စာသန့်စင်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ၏ အမြတ်အစွန်းရရှိမှုမှာ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဘဏ္ဍာရေး အကြပ်အတည်းကာလမှစကာ ယခုအချိန်အထိအတောအတွင်း အဆိုးဆုံးအခြေအနေသို့ ရောက်နေသည်။
ပြီးခဲ့သည့် သီတင်းပတ် တနင်္လာနေ့ အာရှဈေးကွက်တွင် ဒူဘိုင်းရေနံစိမ်းတစ်စည် သန့်စင်ထုတ်လုပ်ခြင်းအတွက် တစ်စည်လျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁ဒသမ၁၉ ဒေါ်လာအထိ အရှုံးပေါ်နေသည်။ အောက်တိုဘာလအတွင်းကဆိုလျှင် တစ်စည်တွင် အမေရိကန်‌ဒေါ်လာ ၄ဒသမ၁၁ ဒေါ်လာ အမြတ်အစွန်းရရှိခဲ့သည်။
ရေနံသန့်စင်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ၏ အမြတ်အစွန်းများကို တိုင်းတာရာတွင် အခြားသော တိုင်းတာမှုတစ်ခုမှာ gross refining margins ဟု ခေါ်သည်။ အဆိုပါ တိုင်းတာမှုတွင် စက်ရုံတစ်ခုမှ ထုတ်လုပ်ပေးပို့သည့် ရေနံစည်များမှ အမြတ်အစွန်းကို တွက်ချက်သည်မဟုတ်ဘဲ နောက်ထပ် ထပ်မံ သန့်‌စင်ထုတ်လုပ်ပေးရမည့်အနေအထားအပေါ် အခြေတည်ကာ တွက်ချက်ခြင်းဖြစ်သည်။
ထိုကဲ့သို့ တိုင်းတာရာတွင် DUB-R-SIN ခေါ် ဒူဘိုင်း ရေနံစိမ်းသန့်စင်ခြင်းမှာ တစ်စည်လျှင် အမေရိကန်‌ဒေါ်လာ ၁၀ဒသမ၅၃ ဒေါ်လာမျှ အရှုံးပေါ်နေပြီး ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဇူလိုင်လက ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည့် တစ်စည်လျှင် အမေရိကန်‌‌ဒေါ်လာ ၁၀ဒသမ၄၉ ဒေါ်လာဆိုသည့် အရှုံးနှင့် မတိမ်းမယိမ်းဖြစ်နေသည်။
စက်တင်ဘာလ ၂၃ ရက်က တစ်စည်လျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၆ဒသမ၁၄ ဒေါ်လာသာ အရှုံးပေါ်ခဲ့ရာ Gross refining margin အမြတ်အစွန်းမှာ လျှင်မြန်စွာကျဆင်းနေသည်ဟုဆိုရမည်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ ပြဿနာ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမှာ လောင်စာဆီရရှိနိုင်မှု များပြားလာခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ တရုတ်နိုင်ငံရှိ ရေနံ သန့်စင်လုပ်ငန်းများမှာ ဒီဇယ်ဆီများ၊ လေယာဥ်ဆီများ ပိုမိုထုတ်လုပ်တင်ပို့နေကြသည်။ ယခုနှစ် ပထမ ဆယ်လအတွင်းပင် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ဒီဇယ်ဆီတင်ပို့မှုမှာ ၁၁ဒသမ ၅ ရာခိုင်နှုန်း တက်လာခဲ့ပြီး လေယာဥ်ဆီတင်ပို့မှုမှာ ၂၁ ဒသမ ၅ ရာခိုင်နှုန်း တက်လာခဲ့သည်။
Next articleEU Lawmakers Clear U.S. Beef Imports but Fault U.S. Tariffs